Sida loo arko RGB ama qiimaha hexadecimal ee pixel kasta shaashaddaada Mac | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo arko RGB ama qiimaha hexadecimal ee pixel kasta shaashaddaada Mac
Ciise Arjona Montalvo | | Kombiyuutarada Mac, Tababarada
RGB, sidoo kale loo yaqaan Casaan / cagaar / BuluugWaa a habka aqoonsiga midabka ay adeegsadaan kormeerayaasha kombiyuutarka. Midab kastaa wuxuu leeyahay qiime RGB u gaar ah, tanina waxay ugu wacan tahay isku darka saddexdaan midab oo wada jira waxay ka dhigayaan nooca midabka aad eegaysaa inuu leeyahay hal cod ama mid kale. Qiyamyadan RGB waxaa loo isticmaali karaa sababo kala duwan, laakiin badiyaa kuwa ka shaqeeya Daabacaadda sawirada iyo sawirada, ama waxaa laga yaabaa inay ku ciyaaraan sawirada, iyo inay muhiim u tahay a Naqshadeeyaha Webka.
Muuqaal yar oo la yaqaan oo uu leeyahay Mac waa in nidaamkaaga qalliinka la mitir in garan karaa RGB iyo midabka hexadecimal ee shaashadda shaashadda ama halkii aad ka Waraaqda aad ku haysato desktop-kaaga, iyo casharkaan waxaan kusoo bandhigeynaa sida loo sameeyo.
1 Aqoonso qiimaha RGB ee pixel kasta oo ku yaal shaashaddaada 'Mac'.
2 Sida loogu helo qaab hexadecimal ah.
Aqoonso qiimaha RGB ee pixel kasta oo ku yaal shaashaddaada 'Mac'.
Haddii aad isku dayeyso inaad wax ka beddesho sawir, oo waxaad u baahan tahay inaad beddesho midabka midabka midkoodna Adobe Photoshop o Pixelmator, ama waxaad isku dayeysaa inaad sameyso sawir yar oo jilicsan, adoo ogaanaya qiimaha RGB ee pixel ee jawi jira ayaa waxtar weyn u yeelan kara gaaritaanka saameynta midabka aad raadineyso.
Mac-gaagu wuxuu ku yimaadaa qalab ay ku shaqeeyaan 'Mitirka Midabka Dijital ah', waxaana laga heli karaa Launchpad> Qaar kale maraya dekedda (sida aad ku arki karto sawirka kore).
Kadib markaad bilowdo arjiga, waxaad jiidi kartaa tilmaamaha meelkasta oo aad rabto shaashadda, oo waxay muujin doontaa aragti ballaadhan oo ku saabsan aagga ay tilmaamayso, waxayna ku nuuxnuuxsanaysaa inay tahay waxa saxda ah ee aad cabbirayso, halka aad sidoo kale ka dooro qaabab badan dhalasho ahaan, P3, sRGB, Generic RGB, Adobe RGB, yy L * a * b *.
Tusaalahan, waxaan ku cabirayaa midabka RGB qayb ka mid ah buurta Waraaqda oo si ku-meel-gaadh ah uga timaadda desktop-ka OS X El Capitan.
Sidaad u aragto, qiimayaashu waxay noqonayaan guduud 88, cagaar ah 33, iyo buluug 40. Waxaad ku isticmaali kartaa isla qiyamka dalab sida Adobe Photoshop o Pixelmator si loo soo saaro midabbo isku mid ah si loogu isticmaalo tifaftirka sawirka.
Sida loogu helo qaab hexadecimal ah.
Bandhigga RGB waa cirifka barafka leh 'Mitirka Midabka Dijital ah' Mac-gaaga. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu soo maro qiimaha midabka hexadecimal, oo waxtar u leh naqshadaha shabakada in ay isticmaalaan CSS y HTML joogto ah. Sida naqshadeeye garaaf iyo horumariye, aniga ahaan waa muhiim, halkee Waxaan badiyaa u adeegsadaa kordhinta biraawsarada si ay hawshan daalka badan iigu fududeyso.
In laga beddelo qiyamka Heerka jajab tobanlaha RGB ilaa qiimaha hexadecimal, waa inaad gujisaa qalabka 'Mitirka Midabka Dijital ah' inaad badasho liiskaaga si aad uhesho, ka dibna dhagsii Muuji > Waxaad muujineysaa qiyamka> Nidaamka hexadecimal in loo beddelo qiyamka qaabkan.
In kasta oo ayan ahayn muuqaal maalin kasta la isticmaali doono, marka laga reebo duruufo gaar ah, 'Mitirka Midabka Dijital ah' waa muuqaal aad iyo aad u fudud oo OS X leeyahay, oo aanan asal ahaan soo ogaan karin illaa iyo intaan bilaabay inaan si qoto dheer u baadho galka faylalka adeegyada, taas oo ah sababta aan u doonayay la wadaag dhamaan akhristayaasha Soy de Mac. Markii aan helay, waxaan bilaabay inaan u adeegsado mar kasta u adeegsiga tafatirka sawirka, badanaa midabka, waxay ku soo beegantay qaabeynta sawirka aan ku isticmaalo gaar ahaan degelkan.
Waxaad sidoo kale xiiseyn kartaa casharradan:
Sida looga dhaqaajinayo xarunta ogeysiiska kumbuyuutarkayaga.
Waxyaabaha lagu qariyo Nidaamka Xulashada Nidaamka.
Ku ordi codsi kasta oo ku saabsan Mac xitaa haddii uusan ka iman Mac App Store.
Kaga soo gal dariiqa taariikhda wareejintaada adoo adeegsanaya toobiye kumbuyuutar fudud.
Isticmaalka shaqadan waxay leedahay adeegsi xadidan, iyo isticmaalaha caadiga ah waxay u noqon kartaa wax yar isticmaalkiisa, iyo khubarada ku jirta naqshadeynta iyo bogagga shabakadda Way xadidnaan kartaa, laakiin waligeed dhib malahan inaad ogaato shaqadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo arko RGB ama qiimaha hexadecimal ee pixel kasta shaashaddaada Mac
Mini Calendar, waa bilaash wakhti go'an OS X
CarPlay wuxuu gaarayaa moodooyin badan, markan wuxuu ka yimid soo saaraha Hyundai